Hirshabelle oo digniin adag u dirtay Shacabka aan u soo xukun doonan Maxkamadaheeda. | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Hirshabelle oo digniin adag u dirtay Shacabka aan u soo xukun doonan...
Hirshabelle oo digniin adag u dirtay Shacabka aan u soo xukun doonan Maxkamadaheeda.
Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo ka hadlayay Munaasabad xariga looga jarayay Maxkamadda Racfaanka iyo Maxkamadda Degmada Baladweyne ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono dadkii aan u soo xukun tagin Maxkamadahaas ee meelo kale ka raadsada Garsoor sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu tilmaamay Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble in Maxkamadahaasi yihiin kuwa kala xukmin doona dadka dacwadahooda u gudbista Shareecada Islaamka.
Sidoo kale Madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa tilmaamay in Maxkamadahani leeyihiin Ciidamo isku dhaf ah oo loo diyaariyay in ay dhaqan geliyaan go’aanada Maxkamadahaasi ay soo saaraan.
Isagoo sii wata hadalkiisa Madaxwynaha Maamulka Hirshabelle ayuu cod dheer ku sheegay in arrimo badan oo gabood fallo ah ay ka jiraan deegaanada Maamulka Hirshablle kuwaas oo sida uu sheegay aysan u dul qaadan doonin islamarkaana ay wax ka qaban doonaan.
Furitaanka Maxkamadahaasi laga hir geliyay Magaalada Baladweyne ayaa ku soo beegmeysa iyadoo baahi aad u weyn oo dhanka Garsoorka ah ay ka taagneed Magaalada Baladweyne iyo qeybo badan oo ka tirsan Gobolkaasi Hiiraan.